Tumira kune kana kubva kuBasel & Zurich Airport | Switzerland-wide service
Transfer Service Basel, basa rako rokuvhara kuenda kana kubva kumakwikwi epaBasel neZurich. KuSwitzerland.
Mitengo yakasimbiswa yakajeka, titize isu tisingazvisungo kana tishandise fomu yedu yekubatana iri pasi apa.
Tora ikozvino uye ubhadhara mushure mokufamba.
Muvhunzo / KUTI
(Tichapindura mukati renguva ye1.)
Uri kutarisa hofisi yekuenda kunhandare kuBasel kana Zurich here? Ipapo tinotarisira kunzwa kubva kwamuri.
Tinobatanidza kunyaradzwa kwebasa rekutengesa taxi nekunzwa kwakanaka kwekutakura kwakanaka kwebasa redu limousine.
Tichafara kukufambisa iwe kusanganisira mutoro kuBasel Airport kana chero imwe nzvimbo kuSwitzerland. Iwe unogamuchirwa kutiudza isu kuburikidza nefomu rekubatana iwe munhu wako zvaanoda.
Chokutanga-kirasi uye zvisingakwanisi kuendesa ndege kuBasel neZurich
Nhandare yedu yekuendesa kunhandare kuSports Airport inotora iwe nokukurumidza uye yakachengeteka kuenda ndege yako kana kudzoka kuguta. Kunyanya pahofisi yendege iyo inowanzotarisa uye inofamba nguva dzose, inoziva kusanzwisisika kwekutsvaga kwekuchengetedza nzvimbo panzvimbo yekunze. Isu isu semakambani ematekisi tinokupai mhinduro nehupfumi hwedu hwekufambisa kwekufambisa kunonyatsotarisa uye kusinganzwisisiki kutarisira kufamba padivi rekudenga.
Chifambiso chekufambisa chikwata nematekisi kuenda kune imwe ndege kune imwe nyika
Mukuwedzera, tinokuendesa kune dzimwe nzvimbo kuSwitzerland uye pedyo neFrance neGermany. Kunyange zvazvo Basel Airport yakakura, haisi nguva dzose inopa kudiwa kwekufambisa ndege. Zvingave zvakakosha kutanga kubva kune imwe nzvimbo yepa ndege. Tinokuendesa kuZurich Airport kana kune dzimwe nyika dzakapoteredza pasina dambudziko, sekutya kuState Stuttgart kana nhandare yeEurope Frankfurt am Main.
Tibatanidza isu kune imwe nzvimbo marwendo, zvisinei kuti uri kufamba uri woga uye uchienda kuSwitzerland, kana kuti uchienda kune bhizinesi kuSwitzerland kune bhizinesi.
Basa redu tekisi
Iwe unorarama muBasel uye unoda kushandiswa kwekuvharidzira kushandiswa Airport Basel Book? Hapana dambudziko, tinotakura kuvanhu vane 7 mubhasi rebhasikisi panguva imwe chete kusanganisira mutoro kuenda kuBaelel, Zurich, Geneva kana kune imwe nyika kune imwe nzvimbo. Tinokuendesa kunyaradzwa uye nguva nenguva kune imwe ndege.
Kushandira vatengesi & makambani
Isuwo tinocherechedza mapurisa emakambani makuru, vashandi venyu vakaita sehotera muBasel uye vanoda kutamira kune rimwe guta, somuenzaniso Zurich, Kana iwe unofanirwa kufamba uye kufamba nenzira imwechete zuva rimwe nerimwe muBasel. Isu tiri shamwari yako yakakodzera mukutakura kwevabatsiri vekuSwitzerland uye yekuendesa ndege.
Titishevedze kana kutitumira SMS uye tibvunzei zvigaro zvatinenge tazvipa.
Basa renyu rekufambisa kushandiswa Basel.
Dhipatimendi Rinobatsira Mazano:
Pasinei ne1 munhu kana 7 vanhu, nguva dzose mutengo wakafanana
Inononoka kusvika Zurich Airport, Basel, Geneva uye vanoenda kune dzimwe nyika
Hapana mari yakavanzwa, zvigaro zvose zvakatarwa
Kwete kuwedzera paunobhadhara nekadhi rechikwereti
Anyanzvi shamwari uye basa
Titishei pane nhamba inotevera: